Famindrana rakitra mampiasa SFTP sy cages amin'ny Debian sy Ubuntu | Avy amin'ny Linux
Famindrana rakitra mampiasa SFTP sy cages amin'ny Debian sy Ubuntu
phico | | Tutorials / Manuals / Tips
! Salama namana! Androany aho mitondra safidy hafa amin'ny fampiasana FTP Server handefasana rakitra azo antoka. Efa ilay mpiara-miasa KZKG ^ Gaara namoaka iray mifototra amin'ny fonosana jailkit. Ilay hamboarintsika dia mifototra amin'ireo fonosana ananantsika bebe kokoa ao amin'ny fitoeram-bokintsika.
Ahoana no fomba hanefenantsika ny mpizara Openssh-server?
Ahoana no fomba hamoronantsika mpampiasa?
Ahoana no fanovana ny lahatahiry an-trano mba hiasa ny tranom-borona?
Matetika isika dia mila fisie azo adika avy amin'ny solosaina lavitra mankany amin'ny masinantsika. Betsaka ny nanontany ahy an'io. Mametraka FTP ve aho? Ahoana no fomba fametrahana SAMBA? Eny, andao handeha avy amin'ny tsotra ka hatrany amin'ny sarotra. Voalohany indrindra, maninona no manasarotra ny tenantsika raha manana ny OpenSSH-Server napetraka ?. Ary raha tsy manana izany isika, miaraka amin'ny baiko tsotra:
aptitude hametraka opensh-server
Ankehitriny dia manana izany isika! Ary avy eo isika dia afaka mamindra tahiry soa aman-tsara amin'ny alàlan'ny protokol SFTP (Secure File Transfer Protocol), izay mampiasa SSH (Secure Shell) ho an'ny encryption.
Amin'ny alalàn'ny default, mpampiasa nahazo alalana hanomboka fivoriana lavitra amin'ny alalàn'ny mpampiasa ssh @ ekipako, ho hitan'izy ireo ny saika ny rakitra rehetra voatahiry ao amin'ny rafitray, izay mety tsy sitrantsika, na noho ny antony fiarovana tsy tokony avelantsika izany.
Ity lahatsoratra ity dia hanampy anay handrindra ny OpenSSH-Server hany ka voafetra amin'ny lahatahiry azy manokana ireo mpampiasa tadiavinay / trano / mpampiasa. Manazava izahay fa, Amin'ity fomba ity, ireo mpampiasa nambara dia tsy ho afaka manomboka session lavitra amin'ny alàlan'ny console ssh na amin'ny alàlan'ny PuTTy. Izy ireo ihany no afaka mamindra rakitra amin'ny na amin'ny lahatahiry azy manokana amin'ny solosaina na mpizara anay.
Ny fomba voalaza eto dia mitombina amin'ny kinova Debian 5 (Lenny) na avo kokoa, ary ho an'ny kinova Ubuntu 9.04 na avo kokoa. Ny kinova amin'ny fonosana SSH an'ny Hardy na Ubuntu 8.04 dia tena lany andro ary tsy manohana ny fanahafana izay horesahintsika eto ambany.
Amin'ny maha mpampiasa azy faka manitsy ny fisie izahay / Etc / ssh / sshd_config miaraka amina tonian-dahatsoratra tsotra. Amporisihinay ny fampiasana ny Nano amin'ny maody console.
Tianay ho eo izao andalana manaraka izao:
Ao amin'i Lenny sy Squeeze dia misy:
Subsystem sftp / usr / lib / openssh / sftp-mpizara
Raha tsy misy izany dia ampidirintsika amin'ny faran'ny fisie:
Subsystem sftp anatiny-sftp
Manohy amin'ny fanovana ny rakitra izahay sshd_config ary manampy izahay amin'ny farany:
Ampifanaraho amin'ny vondrona vondrona-sftp ChrootDirectory% h X11Fandefasana tsy misy AllowTcpForwarding tsy misy ForceCommand anatiny-sftp
Tehirizinay ny fanovana ary averinay indray ny serivisy:
Izahay aloha mamorona ny «vondrona»Izay ambaranay ao amin'ny sshd_config. Mitandrema amin'ny anarana nofidianay teo aloha, tsy ho efa misy io ary vondrona an'ny Rafitra. Raha tsy te-hamepetra ireo mpampiasa efa misy ao amin'ny rafitray izahay dia tsy maintsy mamorona mpampiasa vaovao hahafahan'izy ireo mamindra rakitra. Mba hiasa ny tranom-borona, dia tsy maintsy ataontsika ho mpikambana ao amin'ilay vondrona izy ireo.
addgroup sftp-group adduser user1 adduser user2 [----] usermod -G sftp-group user1 usermod -G sftp-group user2
Mba hijerena ny famoronana ny vondrona sy ny mpampiasa, dia afaka manao:
kely / sns / tenimiafina kely / sns / vondrona ls -l / trano
Ary tokony hiseho ireo mpampiasa user1 y user2ary koa ireo vondrona vondrona-sftp sy ireo izay mifanitsy amin'ireo mpampiasa noforonina. Ary koa, rehefa mitanisa ny lahatahiry / trano, hiseho ny lahatahiry tranon'ny mpampiasa noforonina tsirairay.
Ahoana no fanovantsika ny lahatahiry trano mba hahomby amin'ny tranony?
Tsy maintsy ampitombointsika ny fiarovana ny fampirimana manokana an'ny mpampiasa tsirairay noforonina mba tsy hahafahan'izy ireo mamorona fampirimana fanampiny eo ambanin'ny lahatahiry azy manokana, ary miaraka amin'ny alalana an-tsoratra izay tadiavinay (fa tsy amin'ny toerana tian'izy ireo) 🙂:
root chown: root / home / user1 / home / user2 chmod 755 / home / user1 / home / user2 cd / home / user1 mkdir antontan-taratasy html_public chown user1: user1 * cd / home / user2 mkdir antontan-taratasy html_public chown mpampiasa2: user2 *
Ireo mpampiasa an'ny vondrona vondrona-sftp, manomboka izao dia ho afaka miditra miaraka amin'ny anarany sy ny teny miafiny amin'ny alàlan'ny SFTP fotsiny izy ireo, ary afaka mamindra rakitra sy avy amin'ireo lahatahiry hita eo ambanin'ny fampirimana manokana azy ireo ary noforoninay, fa tsy ho hitan'izy ireo ny ambiny ny rafitry ny rakitra.
Ho an'ny famindrana rakitra sy lahatahiry dia azontsika ampiasaina ny Nautilus, Konqueror, WinSCP, FileZilla, ary ny hafa izay manohana ny protokol SFTP. Amin'ny tranga Konqueror dia tsy maintsy ampiasaintsika trondro: // mpampiasa @ remotecomputer.
Manantena izahay fa ho azo ampiasaina ity lahatsoratra ity!
Mandra-pahatongan'ny traikefa nahafinaritra manaraka ry namana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Famindrana rakitra mampiasa SFTP sy cages amin'ny Debian sy Ubuntu
Lahatsoratra tsara. Fomba tena azo antoka hizarana rakitra. Misaotra betsaka tamin'ny fanazavana. 🙂
Ary tsy mahazo aina kokoa ve ny mampiasa sshfs?
Ho an'ny ekipanay ny folder lavitra dia hiseho ho fampirimana iray hafa miaraka amina toetra mitovy.
Jacobo hidalgo dia hoy izy:
Salama Federico, toy ny lahatsoratra tsara foana. Faly be aho fa afaka mamaky ny lahatsoratrao avy amin'ny Internet izao.
Valiny tamin'i Jacobo Hidalgo
Ahoana ny momba an'i Jacobo, tsy misy Federico tsy manaiky hevitra mivantana. Hey rehefa miverina tsy ubuntu intsony ianao dia mandoko ny maitso sy ny varavarana misokatra ho an'ny olombelona. Famihinana. 😉
Mandray anjara be dia be ianao, tohizo 😀
Misaotra an'arivony KZKG ^ Gaara, ary Misaotra an'ny REHETRA noho ny hevitrao
jaenense dia hoy izy:
Azon'ny mpampiasa sakanana ao anaty lahatahiry hafa ankoatran'ny / trano / mpampiasa /… ..?
Ny tiako hatao dia ny mampiasa tranokala / media / hdd / folder ...
Mila manao an'izany aho satria ny mpizara dia Raspberry Pi miaraka amin'ny Raspbian, ary manana ny / home /… / folder amin'ny karatra sd, izay hameno vetivety
Efa nanandrana azy tamin'ny fomba maro aho ary ny vokatr'ilay mpanjifa dia «Pipa tapaka» foana, ary ny vokatr'izany amin'ny mpizara mahafaty: fananana ratsy na maody ho an'ny singa lahatahiry chroot «/ media / HDD /»
Misaotra betsaka antsika rehetra
Mamaly an'i jaenense
Heveriko fa tsy maintsy holazainao amin'ny rafitra fa ny fampirimana an-tranonkalan'ny mpampiasa dia / home / HDD, raha mbola manana linux zanatany io fizarazarana io, izany hoe, ext4; ext3; Sns Ohatra, raha jae -mba fohy ny mpampiasa- dia tsy maintsy manatanteraka zavatra toy izao ianao:
: ~ # usermod –mindra-trano – trano / trano / HDD jae
Jereo koa ny lehilahy usermod. mahafaly
irving hernandez dia hoy izy:
Manana olana aho, na manana serivisy amin'ny amazona miaraka amina namako ary mila miditra amin'ny alàlan'ny sftp aho hametrahana na hanala rakitra.
Efa nataoko io ary milamina ny zava-drehetra fa androany dia nanao zavatra tamiko izy izay tsy mbola nanjo ahy
Ao anatin'ny ami dia misy andiana lahatahiry ary ny iray amin'izy ireo dia vavahadin-tserasera babo (pejy ho an'ireo mpampiasa ahy) .Raha izany dia manao fampiroboroboana sy fanaovana dokambarotra ho an'ireo mpampiasa ahy aho ary manamboatra fanovana hatrany ary mampakatra azy ireo amin'ny alàlan'ny sftp (miaraka amin'ny wincp). fahazoan-dàlana sy fakan'ny faka
Nomeko chmod 777 ny fahazoan-dàlana hanoratra ary nandeha tsara ny zava-drehetra
fa androany rehefa manavao ny tranonkala sy mampakatra ny index.html sy ireo rakitra hafa dia nanome ahy ireo anarana ireo fa namela ahy tsy misy bytes izay milaza hoe aotra (banga) izao dia tsy mahita na inona na inona ao amin'ny tranokalako ianao
Nakatoko ny session ary niditra indray aho, nanome alalana indray, manova ny mpampiasa, manavao, manandrana mametraka rakitra hafa, mamorona vaovao ary manao toy izany foana
manome ahy ny fisie nefa tsy misy data
Afaka manampy ahy ve ny olona ???
Tena tiako ny valin-teninao
voalohany indrindra, Misaotra
Lic Irving Hernandez
Valiny ho an'i irving hernandez
FCC dia hoy izy:
Salama amin'ny fomba fampiasana filezilla, efa hitako tamin'ny fomba maro io ary mbola tsy afaka mifandray aho.
Valio ny FCC
Ataovy amin'ny fomba tonga lafatra ny fomba fiasa sy ny tranomaizina, na izany aza, rehefa manandrana manoratra amin'ny folder «documents» na «html_publico» dia manome ahy ny fidirana tsy azo atao. Manana alalana voalaza izy io ary tsy misy mamela izany.
drwxr-xr-x. 2 user1 user1 4096 Mar 11 13:16 docs
drwxr-xr-x. 2 mpampiasa2 mpampiasa2 4096 Mar 11 13:16 html_publico
Ny vokatr'izany dia nolavina ny fidirana rehefa manandrana manoratra amin'ny fampirimana rehetra. Na izany aza, mamela izany ny fanaovana get.
Manantena aho fa afaka manampy ahy haingana araka izay tratra ianao.
Stickers ho an'ny tsipika.
Ny KDE haingana sy kanto